Hala-jaza :: Maty voatifitra ny iray tamin’ ireo mpangalatra zaza varira • AoRaha
Nifanjevo indray ireo mpangala-jaza sy ny zandary, tany Behara-Amboasary Atsimo. Maty taorian’ny fifam­pitifirana ny iray tamin’ ireo jiolahy, afak’omaly. Isan’ireo nifanenjehana tany Sakaraha avy nangala-jaza varira na bobo saingy tafapori­tsaka ity lehilahy ity.
“Efa azo sambo-belona io jiolahy io omaly (ndlr: afak’ omaly) tamin’ny 4 ora hariva. Nentina nandeha hisambotra ny namany izy tokony tamin’ ny 6 ora hariva tamin’io andro io ihany. Nanararaotra nitsoaka izy rehefa nahita ireo namany mitam-basy namaly tamin’ny tifitra.
Raikitra ny fifampitifirana ka voan’ny bala avy ao an-damosiny izy. Nentina namonjy toeram-pitsaboana ity lehilahy saingy tsy tana ny ainy”, hoy ny loharanom-baovao avy any Amboasary Atsimo. Malaza amin’ny asan-dahalo nandritra ny taona maro io jiolahy maty voatifitra io, araka ny fitantaran’ireo mponina any an-toerana. Efa tra-tehaky ny mpitandro fila­minana izy sady efa nigadra saingy afaka hatrany. Araka ny fanadihadiana nataon’ireo zandary any Amboasary dia izy no atidohan’ireo hala-jaza varira nitranga tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana ka ha­trany Menabe tamin’ity taona ity.
Namany ireo telo lahy maty voatifitry ny zandary tany Sakaraha tamin’ny volana marsa lasa teo. Votsotra teo am-pelatanan’izy sy ireo namany ny zaza varira iray taorian’io fifampitifirana io. Vao tamin’ny herinandro lasa teo no tra-tehak’ireo mpitandro filaminana indray ireo jiolahy efatra nitondra fiara tsy mataho-dalana tany amin’ny faritra Atsimo Andre­fana. Mbola voatonon­tonona tamin’ io ihany koa ity lehilahy ity.
Fifampikasihan-tanana :: Lehilahy naratra tamin’ ny faniratsirana polisy
Fiahiahiana varo-maizina :: Vahiny roa voasambotra noho ny raharaha halatra taova